Reader Archives - SmartMe
Dom » Entries voamarika amin'ny "mpamaky"
Xiaomi Mi Reader Pro miaraka amin'ny fikarohana amin'ny feo
mpamaky, mpamaky boky, mpamaky mi, mi reader pro, xiaomi
Xiaomi dia namoaka mpamaky e-vaovao vaovao. Ny vokatra Xiaomi vaovao dia antsoina hoe Mi Reader Pro. Io no mpandimby ny Mi Reader ary mpifaninana mivantana amin'ny Amazon Kindle Oasis. Ny zavatra voalohany manintona ny saina dia ny Mi Reader Pro ...
tintaBOOK Calypso - mpamaky e-boky poloney vaovao
Calypso, mpamaky, mpamaky, ranomainty
Ny fanaraha-maso mialoha ny famakiana boky e-booka vaotin-tsoratraBOOK vaovao sy e-press dia vao nanomboka - Calypso. Ny fitaovana dia fitaovana misy efijery E Ink misy diagonaly 6 santimetatra misy fanitsiana malefaka amin'ny hazavana sy ny lokon'ny backlight ary manome fidirana mora ...